Oslo: Xirashada maradda afka oo waajib laga dhigay iyo qodobo kale. - NorSom News
Gudoomiyaha gudiga maamulka magaalada Oslo Reymond Johansen oo maanta shir jaraa´id qabtay ayaa sheegay in dowlada hoose ee Oslo ay go´aamisay in kadib markii la arkay xaalada sii kordheysa ee xanuunka Corona, lasoo rogay qodobadan:
Xirashada marada afka(Munnbind): Dowlada Hoose ee Oslo ayaa waajib ka dhigtay in dadweynaha kunool Oslo ay xirtaan marada afka, marka ay adeegsanayaan gaadiidka dadweynaha, hadii aysan suurtogal aheyn in hal mitir lakala fogaado.
Xafladaha: Waxaa la mamnuucay inay la qabto xafladaha iyo kulamada ay isugu imaanayaan wax ka badan 50 qof, hadii aysan jirin kuraas xiran oo la fadhiisto oo aan la isaga gudbin karin.
Goobaha khamriga: Degmada Oslo ayaa goobaha lagu iibiyo khamriga ku xukuntay inay diiwaangaliyaan magacyada dhamaan dadka soo goobaha lagu iibiyo khamriga, si hadhow loo helo macluumaadkooda, hadii qof soo booqday goobtaas laga helo xanuunka Corona.
Sadexdan qodob ayaa ah kuwo si kumeel gaar ah u shaqeyn doono mudo 14 maalmood, waxaana mar kale dib u qiimeyn lagu sameyn doonaa, marka ay dhamaato mudada 14-ka maalmood ah.
Maamulka Oslo ayaa sheegay inay walaac ka qabaan xaalada xanuunka Corona ee sii kordheysa.
Xigasho/kilde: Innfører påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken.
Previous articleIlhaan Cumar oo weerarkii ugu cuslaa ku qaaday Trump
Next articleTrump oo 750$ oo kali ah canshuur u bixiyay 2 sano.